I-Blitz: UkuSebenza kunye nokuVavanywa koMthwalo kwiLifu | Martech Zone
Kunzima ukuza nothelekiso lomthwalo obekwe kwiserver yewebhu ke apha uya. Khawufane ucinge ukuba ungumncedisi wewebhu kwaye iindwendwe zakho ziitoti zetumato. Ukuba unetoti enye okanye ezimbini zokutya, ungaziphatha ngokulula Yibeke amakhulu ambalwa ezingalweni zakho kwaye akukho kutya kunokufikelela apho kufanele ukuba khona. Ngoku, ukuba ngandlel 'ithile ungabunciphisa ubungakanani betoti nganye, usasaze ngokufanelekileyo, kwaye ufumane uncedo lokuziphathela, unganakho ukuphatha amakhulu.
Umncedisi wewebhu usebenza ngendlela efanayo. Iindwendwe ezingamakhulu ambalwa kunye neseva yakho zinokuba nezixhobo ezininzi zokubonisa kunye nokuzisa undwendwe apho baya khona. Kodwa mfumba kumawaka okanye amashumi amawaka kwaye umncedisi urhubuluza amise. Akunjalo ngokungathi ezinye iindwendwe zinokufika apho kwaye ezinye azinakho… zonke zinqunyanyisiwe. Amaphepha akho abonisa kancinci kwaye ayeke nokulayisha xa uwonke Yinto yethu Indawo yayinengxaki ukusukela kwezi veki zimbalwa zidlulileyo.
Ingxaki kukuba uninzi lweenkampani zihlala ziphuhlisa okanye zisebenzisa iwebhusayithi kwiserver engenamthwalo kuyo. Emva koko bayifaka kwimveliso, iindwendwe ziyeza, kwaye iyehla ngokukhawuleza.
Ukulungiselela oku, ukusebenza kunye nokulayisha iinkonzo unokunceda. Blitz yintsebenzo esekwe kwilifu kunye nenkonzo yokuvavanya umthwalo, akukho software enokuyifaka. Inkonzo ixhasa ukuya kuthi ga kubasebenzisi abangama-200,000 abavela kwiindawo ezisi-8 ezahlukeneyo kwihlabathi liphela (ukuya kuthi ga kwi-50,000 ngommandla ngamnye) ukulayisha uvavanyo lweapp yakho okanye iwebhusayithi. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba bathelekise iindlela ezahlukeneyo zesoftware, izixhobo zehardware, kunye nabanikezeli beenkonzo. Ekugqibeleni, ikuvumela ukuba ufumane ukuhlehla kwenkqubela phambili ngaphambi kokuba iindwendwe zakho zenze.
Blitz Yenzelwe ukunceda usetyenziso kunye nabaphuhlisi bewebhusayithi ukulawula kunye nokuvavanya ukusebenza kulo lonke ixesha lokuphila. Ngophuhliso, ukubeka esiteji, ukuvelisa kunye nokusebenza, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba usetyenziso lwakho luyahlangabezana namanqanaba aphezulu okwoneliseka ngumsebenzisi.
Blitz inikeza izinto ezintle kwiinkqubo eziqhubekayo zokuqinisekisa umgangatho:
Intengiselwano enobunzima Nokuba ufuna ukuvavanya iphepha lewebhu okanye intengiselwano entsonkothileyo, iBlitz yenza kube lula kuwe ukumisela inani labasebenzisi onokubaxhasa.
Ingxelo eneenkcukacha -Fumana iinkcukacha manani kunye nengxelo ngexesha elifanelekileyo, nangesiNgesi esicacileyo. Iingxelo ezinokukunceda ukulungisa iziseko zophuhliso, uchonge iibhotile kwisicelo sakho kwaye umisele ukuba ufuna ukongeza enye iseva.
plugins -Ukongezwa kwethu kweChannel okanye ukongeza iFirefox, ukuhamba nje kwiphepha lewebhu kwaye usebenzise uvavanyo lokusebenza. IBlitz iyayinyamekela ikuki, ukungqinisisa kunye nazo zonke ezinye iingxaki ezisisiseko.
into yokuZenzekelayo -NgeRuby GEM kunye nokudityaniswa okupheleleyo kunye neeseva zokudityaniswa okuqhubekayo njengeseva yeAtlassian's Bamboo CI, ukuvavanywa kokusebenza okuzenzekelayo kunokuqinisekisa ukuba akukho tyhala lekhowudi linokubangela amava amabi kubasebenzisi bakho.
Ukujonga ixesha lokuhamba kunye noMthwalo:
Ukujonga ixesha lokuPhendula kunye noMthwalo:
IBlitz inoPhuhliso API abathengi abaqhuba kwiJava, Maven, Node.js, Python, Perl, kunye ne-PHP.
tags: BlitzilifuJavauvavanyo umthwaloMavenNode.jsukuvavanywa kokusebenzaPerlphpPython
Sihambise amaKhaya… Ungafuna Nawe